Umhla My Pet » Ezintlanu Izifundo Life Wafunda Cats nolwalamano
Ezintlanu Izifundo Life Wafunda Cats nolwalamano
ukubuyekezwa: Jan. 22 2021 | 5 min ukufunda
Xa ndandiqala ndadibana nomfana wam, Christopher, kwiminyaka emihlanu edlulileyo, Ndi omnye isibini kuphela izihlangu tyaba - iibhutsi scuffed ukusuka kwikholeji. Ndicinga kumava am zesidanga, Ndithe ndakuzi Ndade ayenxiba ngayo 10 amaxesha, njengoko izithende eliphezulu wayisa inkoliso uhambo lwam ukuya kwiklasi ngaphandle intshi womkhenkce ndizingcolise kwikhampasi, apho xesha wathembela zinda-. hayike, Mna zaphuculwa yokugqibela (noko.) Intombazana Girly ngandlela zonke, Bendingazi ukuba ukwenza njani sweatpants umhle okanye bazive bekhululekile ebonisa ubuso bam ngaphandle isigqumathelo esenziwe, kwaye andizange ndiyibona le ukutshintshwa. Kodwa wenza, kwaye ndiyathemba ngayo abanye abafazi, njengokuba.
Ukuba kukho into ephosakeleyo esenziwe stilettos - siyayonwabela! Nje musani baxhomekeke kubo. Xa ndijonga iimagazini kunye nothotho rhoqo eendaba elisingqongileyo, Andiqondi ukuba sizibuze kutheni abasetyhini abaninzi kangaka emhlabeni shaky kwisebe ukuzithemba. Mna ukwabelana nani isifundo zilandelayo Ndiye ndafunda nabalingane bam Lwekati nomntu zokudubula-ngqo ebomini bam:
1. Zamkele iimpawu zakho ngamnye: Ngenye imihla yam zasehlotyeni yokuqala Chris, Mna ekuphakuzeleni ngendlela luthuthu ndabona, wabhenela self-umsuki. Xa ndithi luthuthu, Ndithetha mna lelabhastile kumda engangenisi, oku ngokukhawuleza-sisombululo oko kwakhokelela nto amatshe orange uzisole. xa ke (esazi) wabuza ukuba Ebeza ukwambatha self-umsuki, Ndafika acocekileyo (nangona ngengqiqo yokoqobo, njengoko ebandakanyekayo neveki exfoliation.) Landibuza ukuba ndifuna ntoni ukuba eku- ndibene ulusu omhle kwaye kunqabile. Ndiya Ndingathanda Akuzanga kuthethe mntu jonga ulusu lwam ngaloo ndlela, kwaye ndaziva abafazazana kangaka ngokuzama ukutshintsha into eyodwa kunye nemveliso kwakunuka ebuntsimbi abashiya intlok'eyozelayo yam ilokhwe emhlophe Liqula.
namaqabane ethu Ufuna ukuba ngathi thina, yaye sifanele, njengokuba. Yinto efanayo ukuba kubekho abathandanayo iprofayili ifoto uyimisa nto injengaleyo, ufotwe elidlulileyo kwinqanaba lokwamkelwa. Sicela eyodwa zonke, nezo zinto kusenza sahluke kwenza ukuba eme kweso sihlwele. Fumana ukuzithemba ukubonisa iimpawu zakho wokwenene kungekhona ungakhanuki abanye '.
Ke ekati, Kuyafana. A buyi akusayi kakuhle iphawulwe ngaphezu Tabby - ukuba zonke iliso uzibonayo.
2. Musa ihlazo umzimba: Ababini iikati zam mincinane, ezimbini komyinge yokwakha, kwaye ezimbini ezinkulu. Abayazi oku. ikati yam inkulu uyaxhuma phezu iikati nesiqingatha ubukhulu bakhe nezimanga kutheni senu umhla yokudlala asingowokuzamana. Ukuba abafazi kuphela ukuyeka umzimba-bashing thina sobabini umenza kwaye Okothusayo nokuququzelela. Sifike zonke iintlobo zeemilo nobukhulu, ukanti mna ndive kangaka abaninzi abahlobo bam phezu kunye neziphene emzimbeni malunga ezibonwayo. Ezi mbono ke kukhatshwa uloyiko malunga nendlela abantu ukujonga imizimba yabo xa kuthelekiswa wayifanisa Secret kukaVictoria. Ukuba uhlobo self-ntetho kukhokelela equkayo, senza ngayo imizimba yethu kuphela, kodwa imizimba ngokubanzi. Ndiya kuhanahanisa xa ndisiva kuchaphulo ezifana, "Abafazi Real ukuba ndihle." Beautiful abafazi kuza koluhlu iimilo, ngoko ke amkele nantoni nani ubona nathi kwifomu wethu omhle. Amadoda abafuni usive ukwahlukanisa imizimba yethu, kwaye thina sonke-nathi-kudla wazibeka kwiimeko apho soze niphumelele, kungakhathaliseki ukuba iimpendulo zabo. Kate Upton, Kate Winslet, kwaye Kate Moss sohlukene yakha, kodwa bonke jikelele kuthathwa entle?
Ngokuba lixesha elide, Ndandingakwazi ukuma ukuba imilenze yam engasilandeli-ibhityile, ngoko Ndothuka xa Chris wandixelela ukuba yena wayemthanda imilenze yam kucetyiswa ukuba banxibe iibhulukhwe ngaphezulu imibhinqo. Umntu unelungelo uza ungathanda umzimba wakho kukunyanzela ukuba guqula. Ngalo lonke ixesha khumbula ukuba.
3. Konwabele ukutya: Awu, bakuvuyele ephatha. Xa mna ndinganyikimisi ukuba ingxowa ngeInternet, zonke ezintandathu iikati zam phambili ezinyaweni zam. Bathanda ukutya kwindawo apho nto isiganeko. Ngubani onokubagxeka? Njengabafazi ezininzi kangaka, Mna Alwa imfazwe ukutya njengoko ubunzima umzimba ihlazo kutshiwo ngentla-yo ku ngaziva svelte ngokugqibeleleyo kwindawo bra. Ndamlinganisela iimina zantlanu ngaphezulu ngoku xa Chris mna kuqala ndadibana, kodwa ngenxa yokuba, Ndiye ekwabelwana ezininzi pizza kuye ebudeni ngoLwesihlanu thayini ebusuku TV. Ukodlula abo naliphi na inani kwisikali. Ndivuya kakhulu bekhululekile umzimba wam 31 kunam eyayisoloko ebutsheni bam.
Ukutya ngokusempilweni into emangalisayo, kwaye mna likholwa ngokuqinileyo ekunyamekeleni kuThixo (bona ngezantsi.) Ukunandipha ubomi zonke ezithandwa zayo, nangona, yinto entle kakhulu, njengokuba. Musa kugxininisa kakhulu kwi lakho izinga ikhalori ukuba ulahlekelwe umkhondo sinandipha isidlo - kunye incoko mandrax.
4. Zikhathalele: Xa ikati yam udinwe, abalali. (Bonke sisheke edinwe ngokupheleleyo, kunjalo nje.) Xa omnye ikati obacaphukisayo okanye ngenkani isithuba owonyuliweyo, baya kuba mathidala kwi nokudelelwa anayo. kaninzi, si khangela phezu sithetha iingqondo zethu, okanye makungahlulwa umntu esiphatha ngendlela besiya kuwuphatha omnye umntu. Cats, namadoda ngenxa yokuba umbandela, anento umsondlo uze phezu kunye, oko bagqithele nobomi babo engabambe ukuba nengqumbo okanye ubukrakra. Badla musa ukuba nochuku, yaye bayazi ukuba kubhetele ukuba iimvakalelo zakho oyinyaniso ukubonisa kunokuba baqhubeke sisenzo kwaye ukuqhushumba kamva.
Ukunyaniseka ebalulekileyo ubudlelwane, kunye neqabane ekunene akuthande kwanaxa uthandana ngaphantsi loveable kwihlabathi ngaphandle. Ukuba awukwazi ukulivakalisa nto ufuna ngenene, ngoko iqabane lakho uya njani kuwe?
Le okunamandla ezifana, ingakumbi kwabo kuthi bazondelele agreeableness. Ukuba naluphi uncedo, zama ukucinga izinto kwamagama ngendlela yokuba akazange akhathazeke Ukuba ke kuthiwa kuni. Ngalo ndlela, wena uthi ucinga ntoni ngaphandle sincame ubuthongo phezu umba. Okukhona usenza oku, le ngokwendalo kokukhona kuza kuwe. Xa ikhaya lam, nomsondlo kunye purring bobabini ingxolo eqhelekileyo, kwaye zombini zibonakalisa uhlobo intlonelo: abanye kwaye thina.
5. Ibikho mzuzu: Ndisoloko kumangaliswa yindlela iikati yam ukubukela iintaka kugxininiswa efanayo ngendlela Chris udlala ivideo imidlalo yokuzonwabisa. Yakudala yokuyeka ukunukisa roses idume isizathu - nto leyo ezisa nam ndibuyele izithende eliphezulu.
ingqokelela My imbadada kudala eminye imibala eqaqambileyo kunye zikukunongwa strappy, kwaye kusekho eziliqela izibini ezimbalwa balindileyo esililini sam isinxibo ekunene, okanye ubuncinane le netyhubhu polar aphelelwe ngamandla. Xa Chris mna ndaya kuhambo lwethu lokuqala ndawonye Las Vegas, Ndapakisha emihlanu ngababini, babecinga sequins ezingapheliyo kunye neentsiba (kuyabonakala ukuba, enqwondweni yam, Vegas kwakuthetha ndanxiba ifana showgirl.) Zingaphi kwabo izibini Andizange baphela enxibe? Unothi. kunokuba, neembadada yam ekujoliswe ukubetha ngumcu ngesamente veki, kwaye Ndikhumbula indlela nombulelo ngoko ke kwafuneka ukuba. amantombazana abaninzi kunzima abasingqongileyo ibindim iqonga, kwenzakaliswa abalozayo-toe sentuthumbo. Ndandifuna ngokunyanisekileyo ubatshangatshangise esitulweni kunye band-AIDS, Ukwazi ukuba kumashumi yam yokuqala ukuzeyisa ange ezama ecaleni kwabo.
kati lam soze kuphoswa nomatse-ukubukela nje ukuze zibe mpuluswa uboya yabo emva kwindawo, yaye andizange ndikwazi ndazigcina kunye Chris kwafuneka mna neembadada kunye 4 intshi ilifti. Minkarhi, le ngeeholide games sithembele ebhadlileyo izihlangu kunye nenkcitho iiyure esenza phantse nto.
Ubomi konke malunga nokukhula, kunye nobudlelwane enokusinceda siqonde ngcono thina njengoko bakhubeke baphumelele. kwangokunjalo, ubudlelwane banokuzuza self-ukuzithemba, ukunyaniseka onoxanduva, kwaye luthe kwezinye ephatha ngoku uze. ngethemba, thina ukufumana ulungelelwaniso kakuhle hisses kunye (kakhulu) purrs endleleni.
15 Best Akhawunti Twitter ukuba Landela ngenxa Advice Dating kwi 2015
Hawaii – Visting na isilwanyana sakho